Ama-tattoo enyanga | Ukudweba imifanekiso emzimbeni
Ama-tattoo enyanga: zonke izincazelo nemiklamo
Nathi Cerezo | | Ama-tattoos
Inyanga ibilokhu ingumlandeli wezindaba eziningi namaphupho. Ngubani ongazange ajatshuliswe ukubona imigodi yenyanga, ebukeka ingubuso? Inyanga izohlala iphikisana nezindaba eziningi futhi izoqhubeka nokuba njalo ezimpilweni zabantu abaningi. INyanga iwuphawu oluzothola izincazelo ngokuya ngomuntu ozidwebayo, kepha kuyohlala kukhanya ebumnyameni.
Kulesi sihloko sizokhuluma nge- ama-tattoos lwenyanga nokuthi basho ukuthini, ngoba inkanyezi yasebusuku inezincazelo ezingamakhulu ezihlukene. Ngaphezu kwalokho, sizokunikeza imibono nge-tattoo yakho elandelayo eguqulwe ngencazelo ngayinye ukuze uthole umklamo wakho omuhle.
1 Uzibuthe esizizwela ngawo inyanga
2 Incazelo yamathambo enyanga
2.2 I-Fases de la luna
2.3 Inyanga yesizwe
2.4 Izimpisi nenyanga
2.5 Inyanga ebusayo nenciphile
2.6 Unalome nenyanga
2.7 Inyanga enombambisi wamaphupho
2.9 Inyanga encane engokomfanekiso
Uzibuthe esizizwela ngawo inyanga
Inyanga ngumdwebo we-tattoo abesilisa nabesifazane okade bahehwa kuwo futhi uzohlala unjalo njengoba unjalo ngaphandle kokungabaza ngobuhle obedlulele. Kuyi-tattoo ebilokhu ithandwa futhi esazoqhubeka nokuba njalo futhi ukuthi awukwazi ukuthola i-tattoo embi lapho inyanga kungumlingiswa ophambili.
Inyanga, umngane othembekile ophikisana nenkosi yethu yezinkanyezi, umngani nesitha ... ukukhanya ebumnyameni, isisusa sezinganekwane eziningi lapho isintu sihlale sinikeza amandla athile enyangeniKuzohlala kuyisici sempilo yethu esingeke siphuthelwe ukuzizwa siphelele ngemvelo yethu.
Incazelo yamathambo enyanga
Inyanga, njenge-protagonist kuma-tattoos, inika okuningi, kokubukeka kwayo nangenxa ye- izincazelo eziningi ezingaba nazo. Ngokulandelayo sizokhuluma ngezimibalabala kakhulu futhi sizokunikeza imibono nge-tattoo yakho yesikhathi esizayo.
Kubantu abaningi ilanga limele amandla wamadoda nenyanga ngohlangothi lwabesifazaneYingakho izikhathi eziningi kuma-tattoo inyanga ihlanganiswe nelanga. Kuwuphawu lokulinganisela kwemvelo kwezinto: ubumnyama nokukhanya, owesilisa nowesifazane, owesilisa nowesifazane. Lapho lezi zinto zihlanganiswa, zengeza ibhalansi nokuzwana kukhona emhlabeni.
Noma kunjalo imfashini ejwayelekile yamashumi ayisishiyagalolunye yokubeka ilanga nenyanga ndawonye isidlulileKunezinye izindlela ezithokozisayo zokusebenzisa le tattoo, ngokwesibonelo, okwabiwe nothile noma nomklamo obucayi, ophefumulelwe ama-mandalas.
Esinye sezibonelo ezithandwa kakhulu kulokhu, isibonelo, ama-tattoos akhuthazwe yi-yin ne-yang nokuthi ilanga nenyanga bangabaphikisi.
Kunalokho, imidwebo yenyanga nayo ingazimela ngaphandle kwesidingo sokwenza i-tattoo ilanga. Inyanga, uqobo lwayo, inezincazelo eziningi ezehlukene, yize mhlawumbe okungenye yezinto ezibanga ukwazi kakhulu lokhu mayelana nezigaba zenyanga, ezibhekwa njengophawu lokungafi, ukuzalwa kabusha kanye nohlangothi olumnyama lokuphila.
Njengomdwebo, izigaba zenyanga zivame ukukhonjiswa ngombala omnyama nomhlophe uma kulandelwa isitayela esiyiqiniso. Kodwa-ke, futhi zibukeka zizinhle ngombala, nasemiklamweni emi mpo, ngokwesibonelo, ihlala ingalo noma umlenze wonke.
Inyanga ephefumulelwe yisizwe inencazelo ethakazelisa kakhulu ehlobene nokuxhumana nomhlaba kanye nemvelo yomuntu obhalwe tattoo. Impisi ehambisana nalomklamo iqinisa ngokwengeziwe lokhu kufanekisa. Yize kumdwebo we-tattoo wesizwe uvame ukumelwa ngoyinki omnyama, njengoba ubona komunye umbala nawo abukeka emuhle futhi ezuza isibiliboco.
Inganekwane yasendulo yamaMelika Omdabu ithi izimpisi ziphethe ukubheka inkanyezi yakusihlwa (okungukuthi, iVenus), mhlawumbe ngenxa yalokho, futhi ngenxa yemikhuba yasebusuku, lesi silwane sihlobene kakhulu nenyanga. Ngaphezu kwalokho, esiNgisini inyanga yokuqala egcwele yonyaka yaziwa ngokuthi inyanga yempisi.
Akungabazeki kungumklamo othandwa kakhulu futhi unencazelo enothe kakhulu ebukeka inhle emiklamweni eminingi ehlukene, kungaba ngempisi yesitayela enengqondo, enikeza isisindo enyangeni, ngombala, kokumnyama nokumhlophe ukuzuza kumdlalo ...
Inyanga ebusayo nenciphile
Izigaba zenyanga nazo Bacebile kakhulu ngokwezimpawu. Isibonelo, inyanga ewucezu inesimboli esihambisana namathuba amasha, ukukhula, nokuya kwenye indawo. Ngokuphambene nalokho, ukuncipha kwenyanga kuhlobene nokuphela kwesigaba esisodwa nokuqala kwesinye.
Lezi tattoos zibukeka kahle ngezimo ezilula aqukethe isigaba ofuna ukusimela ukusinika ukugqama okufanelekile.
Sesivele sikhulume nakwezinye izikhathi mayelana nokungafani, lokho ukumelwa mayelana nendlela ebalulekile nengokomoya ngayinye. Uma kuhlanganiswe nenyanga, futhi uphawu oluqine kakhulu lobuHindu, sidlulisa umyalezo wokuthi le ndlela yokomoya iyalandelwa ngenhloso yokuthola ukukhanyiselwa okumsulwa nokuyiqiniso.
Ku-tattoo enjalo inyanga ibukeka inkulu kuwo womabili umbala nombala omnyama nomhlopheKonke kuncike ekutheni ufuna ukunikeza ukuthinta okuhle nokushayisayo ekwakhiweni noma uma ukhetha ukuthi kube buthaka futhi kube nokuqondisisa, lapho-ke imigqa emincane emnyama imqoka kakhulu.
Inyanga enombambisi wamaphupho
Noma zingahlobene nanoma iyiphi incazelo ekhethekile, abadobi bephupho abanenyanga bapholile kakhulu. Inyanga imane ihlotshaniswa nomcuphi wamaphupho ngoba umcuphi wamaphupho kufanele asebenze ngenkathi silele, avumele amaphupho amahle nenhlanhla kudlule futhi kubambe amaphupho amabi. Ku-tattoo, ukwakheka okuyinkimbinkimbi komcuphi wamaphupho kukhumbuza ama-mandala, angaholela ekwakhiweni okuhle, okuyinkimbinkimbi futhi okubucayi kakhulu.
Yize kungeyona incazelo kukodwa, kunjalo luphawu lwesizukulwane sonke esikhuliswe eminyakeni yamashumi ayisishiyagalolunye, mhlawumbe yingakho ama-Sailor Moon tattoos athandwa kakhulu. Lo mklamo ucishe uphoqeleke ukuwenza ngombala, hhayi kuphela ngoba umphumela uzojabula kakhulu, kepha futhi nokumela amaqhawe (noma iqhawe elikumele kakhulu) ngombala wazo ogqamile, njengakule tattoo enhle kaSailor Mercury.
Inyanga encane engokomfanekiso
Futhi sigcina nenyanga encane engathekisisi, leyo, eyodwa cishe ngamakhilomitha angama-384.400 ukusuka lapha, isibonelo esihle kulabo abathanda i-astronomy, isayensi eqanjiwe noma umlando. Khetha ukuhambisana nayo nge-astronaut noma i-rocket nangedizayini emnyama nomhlophe ukuyinika idrama futhi izobabazeka nje.
Uyabona ukuthi i-tattoo yenyanga izoncika ekutheni ufuna ukuba nayo kanjani i-tattoo, kukhona labo abadweba isigamu senyanga ngekati, bengeze amalulwane, izinyoni, izinkanyezi noma amafu. Kunemiklamo eminingi kakhulu ye-tattoo yenyanga okungcono ukuthi uzibonele wena bese ukhetha leyo oyithanda kakhulu kumklamo wakho. Sitshele, ngabe kukhona okushiwo yinyanga okukukhanga ikakhulukazi? Unayo i-tattoo enale nto njenge-protagonist? Kusho ukuthini kuwe?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukudweba imifanekiso emzimbeni » Ama-tattoos » Ama-tattoo enyanga: zonke izincazelo nemiklamo
Amanye ama-tattoos onxantathu, i-geometry emandleni
Ama-stair tattoos: ukuqoqwa kwemiklamo nencazelo